Tag: Iwu nchịkwa epi | Martech Zone
Kpido: iwu ụkpụrụ
E webatara GDPR na Mee 2018 ma ọ dị mma. Ọfọn nke ahụ bụ ịgbatị. Mbara igwe adabaghị na mmadụ niile wee gaa ụbọchị ha. Morefọdụ na-enweghị nsogbu karịa ndị ọzọ. N'ihi gịnị? Maka na emere ka enyere nnwere onwe, nke akọwapụtara nke ọma na nke doro anya ugbu a n'aka nwa amaala Europe tupu ụlọ ọrụ enwee ike izipu ha ozi. Odi… Mana ka anyi weghachite. Ọ bụ na ndị dike akụrụngwa ahịa nke ụwa, HubSpot, Marketos wdg. Agwaghị anyị ọdịnaya bụ eze? Ọ bụrụ na ị mepụta ya,